टाउको दुख्नु - स्वास्थ्य संसार टाउको दुख्नु - स्वास्थ्य संसार
Home > रोगको बारे > टाउको दुख्नु
basic health common problem Khagendra रोगको बारे
---डा. खगेन्द्र काफ्ले---
तपाई हामी मध्ये कुनै न कुनै बेला टाउको दुखेको अनुभव नभएको मान्छे कमै होला। टाउकाको एउटा साइडमा टस टस गरेर दुख्ने माइग्रेन, पुरा टाउकोमा दिनभर भारीपन अथवा एकनासको खिचाव जस्तो भएर दुख्ने Tension Headache वा रुघा खोकी पिनास आदिले गर्दा टाउको दुख्ने समस्या नभोगेको मान्छे कमै होला। यदि रक्सि खाने बानि छ भने शुक्रबार या शनिबार धेरै खाएपछि अर्को दिन बिहानको ह्यंगओभर मा टाउको दुख्दा हुने नमिठो अनुभव सबै पिउने मान्छेले पक्कै भोगेको हुनुपर्छ। आउनुहोस धेरैजना मान्छेले भोगेको साझा समस्या को बारेमा केहि छलफल गरौँ।
प्रमिला एक 24 बर्षकी अबिबाहित युवती हुन् । भर्खरै MCA सकेर जागिर खोज्दै गरेकी उनलाई टाउको दुख्ने
समस्याले निकै ग्रसित गरेको छ । सानी बहिनीलाई पहिलादेखिनै घरबाट बाहिर जान डर लाग्ने समस्या भएको र यिनलाई पनि नया समस्या सुरु भएकाले प्रमिलाका दाइ निकै चिन्तित देखिन्थे । के हुने रहेछ भन्दा प्रमिलालाई बीच बिचमा सहनै नसकिने गरि दायाँ निधार तथा कन्चटको आसपास टाउको दुख्ने रहेछ। घरका कामहरु गर्दा तथा घर बाट बाहिर घाममा निस्कदा, रेडियो, टिभी को चर्को आवाज सुन्दा यो समस्या अझै बढ्दो रहेछ । टाउको दुख्ने समयमा कहिलेकाही उल्टी आउने चक्कर आउने पनि हुने कुरा उनले डाक्टरसंगको कुराकानीमा सुनाइन । धेरैजसो बेला टाउको दुख्नु शुरु हुनु भन्दा अगाडी आँखाको अगाडी अँध्यारो देखिने जस्तो अनुभव हुदो रहेछ । धेरैजसो पटक आधा एक घन्टामा दुखाई आफैं कम भएपनि कुनै दिन भने दिनभरी गार्हो हुने कुरा पनि उनले आफ्नो अनुभवमा सुनाइन । धेरै ठाउमा देखाउदा पनि उनको समस्या मा खासै सुधार न आएपछि उनि यहाँ आएकी रहिछन । सिटि स्क्यान देखि लिएर अरु विभिन्न परिक्षण सबै नर्मल थिए। डाक्टरले उनको बिमारीलाई माइग्रेनको नाम दिए। साथसाथै दुखेको बेलामात्र खाने एक थरि दबाई र दिनहु खाने अर्को थरि दबाई दिएर रहनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सुझाव पनि दिए।
प्रमिलालाई भएको समस्या हरेक छ देखि सात जना मानिसमा एक जनालाई हुने Migraine Headache हो । खास गरेर किशोर तथा बयस्क अवस्थाका महिलाहरुमा यो धेरै हुने गर्छ । यसका लक्षणहरु माथि उल्लेख गरिएझै टाउकाको एक साइडको भागमा नसा बल्केको जस्तो गरि टाउको दुख्ने हुन्छ । माइग्रेन सामान्यता केहि घन्टामा आफै कम भएर जान्छ तर कसै कसैमा यो एक पटक शुरु भएपछी २/३ दिनसम्म लगातार रहन पनि सक्छ। कतिपयमा टाउको दुख्नु अगाडी मन बेचैन हुने, उदास हुने, स्वभावमा अचानक परवर्तन आउने जस्तो कि चिढिने, रिसाउने जस्ता लक्षण देखा पर्छन भने 15-20 प्रतिशत बिरामी मा टाउको दुख्नु अगाडी अनौठा अनुभवहरु हुने जस्तो कि आखाको अगाडी प्रकाशका झिल्काहरु देखिने, अचानक अँध्यारो हुने, शरीरको कुनै भागमा झन्झनाहट हुने, नभएको गन्ध आउने जस्ता लक्षण देखिन्छन। कुनै मानिसमा एक साइड मा मात्र नभई दुवै साइडमा दुख्ने पनि हुन्छ। माइग्रेन का बिरामीहरु खासगरेर एकान्त तथा अंध्यारो ठाउमा बस्न र काम गर्न रुचाउछन।
माइग्रेन को खास कारण यहि नै हो भनेर थाहा नभएपनि बैज्ञानिकहरुले यसमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । मस्तिष्कका नशाहरुको आकार मोटो हुनु, कुनै खास रसायन जस्तै सेरोटोनिन (serotonin) को मात्रामा परिवर्तन आउनु यसका कारणहरु मानिन्छन।
माम्शपेशीको खिचावको कारणले गर्दा हुने टाउको दुखाई (Tension Type Headache)
कसैले झन्झटिलो काम दियो भने हामी भन्ने गर्छौ यो कामले मेरो दिमाख खाइरहेको छ। कसैसंग रिस उठ्यो भने हाम्रो टाउको तातेर आउछ । कुनै समस्याले पिरोलिरहेको छ भने हामी भन्छौ एसले त मेरो टाउको नै दुखायो। हरेक तनाव को समयमा अथवा आरामसंग बस्न नपाएको बेलाको अवस्था लाइ जनाउन हामी टाउको लाई कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्छौं यद्यपि न त हाम्रो टाउको साच्चै दुखेको, तातेको या कसैले खाएको नै हुन्छ । तर यस्ता कतिपय परिस्थितिमा साच्चै नै टाउको दुखेर दबाई लिनुपर्ने या डाक्टर भेट्न जानुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । जसलाई चिकित्सकको भाषामा Tension Type Headache भनिन्छ ।
चिन्ता, घबराहट, तनाब, थकावट आदि Tension Headache का मुख्य कारण हुन्। । टाउको, अनुहार, घाँटीमा भएका माम्शपेशीहरु मा तनावको कारणले खिचाव आएर टाउकोमा दबाब या भारीपन महशुश हुन्छ जुन माइग्रेन भन्दा कम पीडादाइ हुन्छ । तर यस्तो दुखाई लगातार धेरै दिन सम्म रहिरहन सक्छ । समान्यतया टाउकाको दुवै भागमा बिस्तारै सुरु भएर एकनास संग दुख्ने गर्छ जुन दिउसो या साँझ सम्म बढ्दै जान्छ। मानशिक तनाव र थकावट को अलावा अरु शारीरिक कारण हरु जस्तै आँखाको देख्ने शक्तिमा कमजोरी आउनु ( नजिक वा टाढाको नदेख्नु ), अफ्ठेरो संग सुत्नु या काम गर्दा बस्ने स्थिति आरामदायक नहुनु जस्ता कारणले पनि माम्शपेशिमा खिचाव ल्याउछन र टाउको दुख्ने समस्या आउन सक्छ । माइग्रेन जस्तै यो पनि महिलाहरुमा नै धेरै हुने गर्छ ।
Cluster Headache (क्लस्टर हेड़ेक)
कल्पना गर्नुहोस तपाई आफ्नो माथिल्लो ओंठ लाइ समातेर माथितिर फर्काउदै हुनुहुन्छ। ओंठलाइ तन्काएर निदार सम्म पुर्याउदा कत्तिको दुखाई महशुश होला ? सोच्दा पनि जिरिङ्ग भयो होला । क्लस्टर हेड़ेक हुने मानिसहरु ले यस्तो गर्दा दुख्दा हुने पिडा साच्चै नै भोगिरहेका हुन्छन । यो प्रकारको टाउको दुख्ने बिमारी कमै मानिसलाई हुन्छ र खासगरी पुरुषहरुलाइ धेरै हुन्छ । एक साइडको आँखाको पछाडी छुरिले छेडेको झैँ गरि केहि मिनेट देखि बढीमा आधा घण्टा या 1 घण्टा सम्म लगातर दुखिरहन्छ र कुनै दिनमा एकै दिनमा २/३ पटक सम्म पनि यस्तो दुखाईको महशुश हुन सक्छ । टाउका दुख्दा आँखा रातो हुने, आँखाबाट आँशु आउने यो बिमारिका अरु लक्षण हुन् । चुरोट रक्शिको सेवन गर्ने मानिसहरुमा यो बिरामी धेरै हुने गर्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका बाहेक टाउको दुख्ने बिमारी अरु नै कुनै बिमारिका लक्षण हुन पनि सक्छन । अरु रोगहरुको कारणले गर्दा हुने टाउको दुख्ने लक्षणको बारेमा अर्को पटकको लेखमा बताउने छौ । साथमा यस्तो टाउको दुख्ने समस्याको उपचार र रोकथाम को बारेमा बारेमा जानकारी पाउन स्वास्थ्य संसार हेर्दै गर्नुहोला । लेख सम्बन्धि कुनै अरु जानकारी चाहिएमा निसंकोच सोध्नुहोला ।
Dherai ramro jankarimulak article lekhnu bhako ma dhanyabad.
its realy good 4r us...thanks
Item Reviewed: टाउको दुख्नु Rating:5Reviewed By: Unknown